Kismaayo News » Xilahaaga warqadeheeda fitish! WQ Axmed C/Samad
Xilahaaga warqadeheeda fitish! WQ Axmed C/Samad
Qolka jiifka ayuu ku kaliyaystay. Xaggay jirtaabuu is weydiiyey. Naftiisa iyo shaydaan baa wax u muujiyey. Buug sariirta dhineceeda yaal buu eegay. Wax uu fahmo iyo wax aanu fahminba waa ku yaalaan.
Ar naagta armaan qalbigeeduba ila joogine aan jir faaruq ah iska fiirsanayaa?. Armay saaxiibo hore lahaan jirtey?, armay waxyaabo xunxun soo martay, armay wax iga qarisay armay armay???. Wixii buug iyo warqad guriga yaalay buu akhris ugu dhaqaaqay bal inuu sir qarsoon ka helo. Waaba gabay, waa riwaayad si wacan loo diyaarshay, tolow yay ka hadlaysaa?, kay sheegayso ma anaa?, ma mid kalaa?.
Wixii jirro iyo waswaas dunida joogay baa ku soo wada dagay. Gacaladiisa wixii uu jacayl iyo kalsooni u hayey waa burureen. Intaan wax u huray waa ka kac, naag waligaa ha aaminin. Yay isu kaa oohin, waa mid lagugu dabayo. Horaa rag uga hadlay!.
Intaa ka dib ragga qaar bay la tahay inay naagta awood buuxda oo dhan walba ah ku leeyihiin: fakarkeeda, qalbigeeda, dareenkeeda, intaanu guursan ka hor iwm. Waxay la tahay inuu gar u leeyahay inuu wax walba ka ogaado, haddaanay u sheegina ay khiyaantay.
Kuwo kale waxay u qabaan inay xaq u leeyihiin inay si buuxda u koontoroolaan oo u ilaalinaya sidii faasiqad haddii isha laga laabo nin walba isu dhiibaysa!. Si ay wax uga ogaadaana ku haya baaritan iyo basaasid joogto ah. Kuwo raadka guriga ag maray oo dhan eega ayaa jira, kuwana bal wax isbadal ah oo ka muuqday ka eegaan bal in balo uga dambaysey iyo in kale iwm.
Aynu ogaano in gabadhaan Ilaahay ku aaminay waxa aad ka waardiyaynaysid wax ka weyn oo ah caqiidadeeda, diinteeda oo ay ugu horayso salaaddeeda, soonkeeda, dahaaradeeda, ciddadeeda, waxa uurka ugu jira iwm.
Haddii shaki wax walba lagu furayo soo lama oran karo: naagtaan bilay gaalad ahayd oo silaamnimo beena sheeganaysey oo haddaa in la qabo waa xaaraan. Bilay salaadda dahaaro la’aan tukanaysey, bilay soonka hoos wax u cuntay, ciddadii iyada oo aan ka bixin bilay ku tiri waa ii dhammaatay. Iyada oo nin kale uur leh bilay kuu qarisay????. Haddii albaab shaki oo aan xujo ku qotomin la furo meel walba ayuu galayaa. Ogow laftaadana intaas iyo ka badanba waa lagugu furi karaa.
Dhinac kale is weydii adigu xaaskaaga ma wax walba ayaad u sheegtaa, miyayse kugu khasabtaa inaad illaa wa illaa taariikhdaadii oo dhan u dhigtid?. Maxaa kuu gaystay inaad miskiinta buugaagteeda iyo warqadeheeda fitishtid?. Soo ma ogid in nabigeenu scw diiday in ninkii reerkiisa ka maqnaada in aanu habeenkii guure ugu imaan. Soo ma ogid jaajuusnimada iyo baarbaarista ceebaha muslinku inay halaag tahay oo natiijadeedu tahay in adna Ilaahay ceebahaaga kashifo?.
Marka aynu ka digayno shakiga iyo baarbaarista ceebaha macneheedu maaha in aanu ninku xaaskiisa u qiiroon oo ka xumaan wixii sharciga iyo sharafta waxyeelaynaya oo naagtiisu ku kacdo, waase wax dhacay ee maaha male-awaal iyo waswaas shaydaan wato.
FG: Asalka fikradda iyo badanka maaddada waxaa leh Dr. Salman Al-cowdah ee halkaan ka akhri: http://islamtoday.net/salman/artshow-28-104000.htm